Arati Lohorung: January 2011
Posted by Arati at 4:21 PM No comments:
यो कुइरेहरु को कुरा पनि अचम्म लाग्दो नै हुन्छ।
एउटा कुइरे थियो रे । त्यसले एउटा भेतनामी बच्चा पाल्न ल्याको रहेछ । अनी अर्को कुइरेनी लाई ' तिमी मेरो श्रीमती नबन तर मेरो बच्चाको आमा बनी देउ न है ' भन्यो रे । कुनै नेपाली ले नेपाली लाई यस्तो भनेको तपाईं कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ ?
Posted by Arati at 1:31 PM No comments:
'अनी सरिता अब त पाइन्ट लाउन्नौ होला नि है । बुडोले के भन्छ?'
' क्वाटर सम्म त हुन्छ रे। तर सासु ससुरा आको बेला चै कुर्ता रे । 'नयाँ दुलही उत्तर दिन्छिन
Posted by Arati at 4:50 PM No comments: